ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအဘို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင် China Manufacturer
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအထူးမူဘောင်,ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအထူး Frame က,ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ Frame ကဈေးနှုန်း
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအထူးမူဘောင်,ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအထူး Frame က,ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ Frame ကဈေးနှုန်း
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ > ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအဘို့မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးမူဘောင်
မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအရိုးစုအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း၏မရှိမဖြစ်အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာခြောက်လ, ရှစ်ဆယ်တဆယ်နှစ်, ဆယ်ခြောက်, တဆယ်ရှစ်, နှစ်သောင်းနှစ်ဆယ်လေးရွတ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြေမှုန့်အရိုးစုကအလွန်ကြီးမားသည်နှင့်ကျယ်ပြန့်နိုင်အောင်အပေါ်သတ္တုဗေဒ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, Coke, ပါဝါမျိုးဆက်, nonferrous ရောစပ်, သံမဏိ, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ကျောက်မီးသွေးမိုင်းနှင့်အသုံးပြုသည်။
1. (ပြင် filter ကို)
2. (ပြင်ပ filter ကို)
3. (ပြင် filter ကို) (ဘဲဥပုံ, rhombus)
5. ပေါင်းစုံအပိုင်းဘောင် (ဘဲဥပုံပေါင်းစုံအပိုင်းဘောင်။ က Round အိတ်အမျိုးအစားပေါင်းစုံအပိုင်းဘောင် (ထည့်သွင်းအမျိုးအစား, Chuck အမျိုးအစား) ။
6. (venturi ဘောင်နှင့်အတူ, ပလပ်စတစ်အိတ်, သံဘောင်ထုပ်ပိုးမူဘောင်, သပ်သပ်ရပ်ရပ်စိန်ဘောင်) ထုတ်ကုန်ဘောင်ကိုလက်စသတ်
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအထူးမူဘောင် , ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအထူး Frame က , ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ Frame ကဈေးနှုန်း , ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် Organosilicon ကေ့အရိုး , ဓာတ်အားပေးစက်ရုံအဘို့စက်မှု cinder Valve , Venturi ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏အိတ် Filter , ဖုန်ကောက်ခံရေး၏စာအိတ်မူဘောင် , ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ Baghouse